Thermomix | फलहरु संग व्यंजनहरु थर्मोराइकिप्स (पृष्ठ २)
कद्दू र हरियो बीन्सको साथ छोसेको स्टू एक पौष्टिक चम्चा र थर्मोमिक्स® को साथ बनाउन सजिलो छ।
१० सजिलो र स्वादिष्ट मटर व्यंजनहरू
मटरको साथ १० रेसिपीसहित यो संकलन Thermomix को साथ बनेर सालभर सजीलो फुल खान्ने आदर्श हो।
सेतो सिमी र स्वादयुक्त रोटीको साथ तरकारी सूप
धेरै तरकारीहरू र दुई प्रकारका फलीहरूसहित हामी स्वस्थ र मूल स्टू तयार गर्न जाँदैछौं। रोटीलाई विशेष स्पर्श दिन नबिर्सनुहोस्।
चोरिजोको साथ सेतो सेम
चोरिजोको साथ सेतो सेमका लागि यो नुस्खा छिटो, धनी छ, र अग्रिम बनाउन सकिन्छ। तपाईं तिनीहरूलाई प्रेम गर्नेछौं!
चोरिजो र तरकारीहरू सहित कालो गेडाहरू
चोरिजो र तरकारीहरूसँग स्वादिष्ट कालो बीन स्ट्यू, गाजर र आलुको साथ, जुन २ minutes मिनेटमा तयार हुन्छ।
रातो गोभी सूप
रातो गोभी सूप एक आरामदायक, सुन्दर र धनी नुस्खा हो। गिरावट र जाडो महिनाहरूको लागि उत्तम।
मटरको साथ rec रेसिपीहरू, विविध र धेरै साधारण
हामी फ्रिजन मटरले बनेको simple वटा साधारण रेसिपीहरूको छनौट गर्छौं, त्यो घटक जुन हामीसँग घरमा सधै हुन्छ।
बोलेटस, चेस्टनट र दालचिनीको साथ पार्टी मसूर
बोलेटस, चेस्टनट र दालचिनीको साथ यो उत्कृष्ट शाकाहारी मसूर रेसिपी सम्झनुहोस्। मासु वा माछा बिना उत्सवको थाल।
बदाम संग मटर
यदि मटर एक लेग्युम हो भने के हामी फाइदा लिन्छौं र तिनीहरूलाई स्ट्युको रूपमा तयार गर्दछौं? परिणाम: धेरै तरकारीहरू सहित एक हल्का डिश।
चामल र चिकन सॉसेजको साथ दाल
के तपाईंलाई थाहा छ कि लेग्युम र सिरीयल व्यंजनहरू पूर्ण छन्? चामल र सासेजका लागि मसूरको लागि यो स्वादिष्ट विधिको आनन्द लिनुहोस्
हामी केही मसूरको साथ चम्चाको भाँडामा फर्कन्छौं जुन सानालाई धेरै मनपर्दछ। तपाईंले थोरै चरणहरू अनुसरण गरेर यो डिश तयार पार्नुहुनेछ।
यस कम्पाइलेशनमा हामी तपाईंलाई summer ग्रीष्मकालीन व्यंजनहरू छोलाको साथ, सरल र फलहरू रमाईलोको रूपमा देखाउँदछौं।
Chistorra र हेम संग दाल पनी
सब भन्दा चामल दाल, हेम हड्डी, chistorra र सेरानो ह्यामको साथ सिमर्ड। अविश्वसनीय स्वादिष्ट।
चना मसाला, चना करी
चना मसाला, नेत्रहीन चना करी सहित बासमती चामल। भारतबाट स्वादले भरिएको एक अविश्वसनीय पकवान।
Andalusian स्टू मेरो आमा बाट
स्ट्युको साधारण संस्करण, कुखुरा र पोर्कबाट बनेको, दुई मोडमा प्रस्तुत गरियो। एक सजिलो र वास्तवमै स्वादिलो ​​चना स्टू।
पालक र गाजरको साथ क्रीमयुक्त दाल
पालक र गाजरको साथ क्रीमयुक्त दाल। एक सरल र स्वादिष्ट नुस्खा, एक विशेष स्पर्शको साथ, जसले हामीलाई ऊर्जा र जीवनशैली दिन्छ।
मसूर र जैतून पाटे
नायकको रूपमा दालको साथ मूल aperitif। हरियो जैतून, कुटीर चीज, ताहिनी, नुन र कालो मिर्च ल्याउनुहोस्। र गर्न सजिलो छ।
कद्दू संग बीन स्टू
यो बीन र कद्दू स्टूलाई थर्मोमिक्सको साथ तयार गर्नु सरल छ र 40० मिनेट भन्दा कममा तपाईसँग चिसो दिनको लागि फलफूलहरूको प्लेट हुनेछ।
मसूर र तरकारी सूप
शरद ofतुको आगमनसँगै, आज जस्तोको व्यंजनहरू मुडमा छन्, तातो छ। हाम्रो YouTube समुदायमा तपाईंले हामीलाई सुझाव दिनुभयो ...
मसूर र गाजरको साधारण क्रीम। फलफूलहरूको लागि एक विधि जुन तपाईं Thermomix सँग बनाउन सक्नुहुनेछ र तपाईंको साप्ताहिक मेनूमा प्रयोग गर्नुहोस्।
ग्रीस दहीको टचको साथ तरकारी र जीराको दाल
केही तरकारी तरकारीहरू, पारंपरिक शैली, जीराको साथ। र थाली समाप्त गर्न, हामी तिनीहरूलाई ग्रीक दही को एक बड़ा चम्मच संग सेवा गर्न जाँदैछन्।
कद्दू र सॉसेजको साथ स्टिउन्ड मसूर
कद्दू र सॉसेजको साथ स्वाददार र स्वादिष्ठ दाल। फलफूलको राम्रो प्लेटको मजा लिन स्वादले भरियो।
आर्टिचोकस र थर्मोमिक्समा बनाइएको मशरूमको साथ यी मसूरको साथ तपाईंले टेम्पर्ड उत्पादनहरूका साथ शाकाहारी चम्मच डिशको आनन्द लिनुहुनेछ।
झींगा सहित भर्डिनस हाम्रो क्षेत्रीय भोजनको डिश हो जुन हामी थर्मोमिक्ससँग बनाउन सक्छौं। एक गहना जहाँ फलफूल समुद्री खानेसँग मिल्दछ।
XXL दाल, भिटामिन र फलामले भरिएको, पालक, काला, सूर्य-सुकेका टमाटर र spirulina साथ थकान र थकान को क्षणहरूको सामना गर्न।
मोरोकोको वा "चिक मटर चक्कर"
चिकन ह्युमस जेनमा बनेको थियो, मोरोरोको, गार्बान्जोस माराओस वा पुचेरो माराओ भनेर चिनिन्छ। एक सरल र वास्तवमै स्वादिष्ट स्टार्टर वा खाजा।
ब्रसेल्स स्प्राउट्स र सॉसेजको साथ बीन स्टू
निस्सन्देह, यो चिसो संग, तपाईं पहिले नै चम्चा पकवान को एक प्रशंसक भएको छ। यदि हो भने, तयार हुनुहोस् किनभने आज हामी सिमी स्टूको साथ ल्याउँदैछौं, क्याबीहरूसँगै यस सेम स्टूको साथ ब्रसेल्स स्प्राउट्स र सॉसेज तपाईं चिसोसँग लड्न एक प्रामाणिक चम्मच पकवानको आनन्द लिनुहुनेछ।
केसर पालक संग सेतो सेम
पालक र केसरको साथ सेतो सेम। हामीसँग २ 25 मिनेटमा तयार हुनेछ कि एक अभिव्यक्ति स्ट्यु। सजिलो, छिटो र धेरै स्वस्थ।
आधारभूत नुस्खा: थर्मामिक्सको साथ छोला पकाउनुहोस्
थर्मामिक्सको साथ छोला पकाउनको यो नुस्खाको साथ हामी हाम्रो बेसिक रेसिपीहरूको विशेष संग्रहको विस्तार गर्छौं जसले तपाईंलाई हरेक दिन यसैको प्रेममा पार्छ।है हामी तपाईंलाई थर्मोमिक्सको साथ छोले कसरी पकाउने भनेर देखाउँदछौं। परम्परागत व्यंजनहरूको सबै स्वाद आनन्द लिन एक सजिलो र सरल आधारभूत नुस्खा।
यी शरद leतु दाल संग तपाईं पूरै परिवार को लागी उपयुक्त तरकारी संग फलहरु को लागी एक पौष्टिक र साधारण नुस्खा हुनेछ।
थाइमको साथ छोला
तपाइँ गर्मी मा रूपान्तरित एक सब्जी पकवान चाहानुहुन्छ? थाइमको साथ यी छोलाहरू यी हुन्, सरल विधि जुन अग्रिम बनाउन सकिन्छ। तपाईको थर्मोमिक्समा थाइमको साथ छोलाको लागि यो नुस्खा जहिले पनि तयार पार्नुहोस् धेरै नै सजिलो छ र तपाइँ यसलाई खानपानमा तरकारी सलादको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
एप्पल tzatziki साथ Chickpea सलाद
ग्रीष्म legतुमा, फली सलादहरू अद्भुत, सजिलो, स्वादिष्ट, स्वस्थ, पौष्टिक हुन्छन् ... हामी उनीहरूलाई अग्रिम तयारीमा छोड्न सक्दछौं र साथै, एक स्फूर्तिकारी चाना सलाद र करी भिनाग्रेटको साथ एप्पल तजाटिकी सॉस पनि हुन्छ। गर्मी को समयमा फलिया खान उत्तम तरिका।
एडामेमेको बारेमा तपाईलाई जान्नुपर्ने सबै कुरा
फाइदाहरू पत्ता लगाउनुहोस्, कसरी एडिमेमेलाई पहिचान गर्न र पकाउन, एक फलीदाखाना जसले हामीलाई अझ राम्रो आहार लिन मद्दत गर्दछ। यसमा के गुणहरू छन्?
चोरिजोको साथ दामलाई थर्मोमिक्सको साथ पकाउन सिक्नुहोस् र यी फलहरू र तिनीहरूको सम्पत्तीहरूको आनन्द लिनुहोस्। Thermomix संग कसरी दाल तयार गर्ने जान्नको लागि हाम्रो युक्तिहरू र भिडियोको साथ चोरिजोको साथ मसूरको लागि अधिक रेसिपीहरू प्रविष्ट गर्नुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस्।
यस स्ट्यू मोनोग्राफको साथ हामी सिक्दछौं कि एक राम्रो स्टूको सफलता धेरै राम्रो गुणस्तरका सामग्रीहरू प्रयोग गरेर हो; हामी स्ट्युको विभिन्न भौगोलिक प्रजातिहरूको बारेमा पनि सिक्नेछौं, र कसरी स्टूको फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि अन्य उत्तिकै तयारीमा छ।
थर्मोमिक्सले बनेको sp चम्चा रेसिपीहरू
Thermomix को साथ बनेको sp चम्मच व्यंजनहरुका साथ शानदार कम्पाइलेसन जसले तपाईंलाई स्वस्थ खाना पछ्याउँदा राम्रोसँग खान मद्दत गर्दछ।
क्रिस्की जर्कीको साथ सेतो सेम क्रीमका शटहरू
अचम्मित गर्नका लागि एक विधि: क्रिस्की जर्कीको साथ सेतो बीन क्रीमको शटहरू। अतिथिहरूको साथ खानाको लागि एक स्टार्टरको रूपमा आदर्श।
Chorizo ​​संग सेतो बीन्स
Chorizo ​​साथ सेतो बीन्स। एक सरल प्लेटमा खानाको एक राम्रो प्लेटको मजा लिने एउटा द्रुत र स्वादिष्ट तरीका र सबै स्वादको साथ।
Caldito सेतो सिमी संग प्रकाश प्रकाश
एक सुपर छिटो र स्वस्थ तरकारी पकवान: गाजर र आलु संग सेतो सिमी। पहिलो पाठ्यक्रम को रूप मा आदर्श जब हामी भान्सा मा धेरै समय छैन।
तरकारी र सॉसेजका साथ सिमी
तरकारी र सॉसेजको साथ यस बीन स्टूको साथ चिसोको लागि तयार हुनुहोस्। तपाईं Thermomix संग एक सरल तरिकामा फलहरू आनन्द लिनुहुनेछ।
मटर र टर्की प्यूरी
यो मटर र टर्की प्यूरीको साथ तपाईं फलफूललाई ​​आफ्नो बच्चाको आहारमा समाहित गर्न सक्नुहुनेछ। Thermomix साथ स्वस्थ र सजिलो शिशु आहार।
झींगाको साथ Chickpea सूप
क्यान्ड चना र झींगाले बनाएको एक सरल स्ट्यू। धेरै तरकारीहरू जुन तपाईं देख्न सक्नुहुन्न, केही बच्चाहरूको लागि आदर्श हो।
गाजर र सलादको साथ मटर
हामी तपाईंलाई कसरी गाजर र थर्मोमिक्सको साथ लेटसको साथ केहि मटर बनाउने तरिका देखाउछौं। स्वस्थ र हल्का डिनरका लागि उत्तम विधि।
बार्बेक्यू मासुको साथ सेतो सेम
बार्बेक्युबाट मासुको फाइदा लिनको लागि एउटा उत्तम विचार। एक एक्सप्रेस डिश, स्वस्थ र पौष्टिक ... र स्वादिष्ट !! फलफूल र तरकारीहरूसँग, १ minutes मिनेटमा।
चनामा आधारित बर्मी टोफूको यस नुस्खाको साथ घरमा रमाइलो गर्नुहोस्। सरल, चिल्लो र तपाईं अनगिनत तयारीहरूमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
मेक्सिकन स्वादको साथ रातो सिमी
रातो बीन्सको उत्कृष्ट र स्वादिष्ट स्टू, तरकारीहरूसँग पकाइन्छ र प्रामाणिक मेक्सिकन स्वादका साथ मसालेको हुन्छ: मसला र तिखो।
तरकारीहरूसहित हल्का सेतो बीन स्ट्यू
तरकारी र सुगन्धित जडिबुटीको साथ हल्का सेतो सिमी स्टू। फलफूल, प्रकाश र तयार गर्न सजिलो को पहिलो कोर्स को रूप मा आदर्श।
दाल zucchini साथ
नरम, पौष्टिक र स्वादि दाल zucchini र अन्य तरकारीहरु संग। Thermomix को साथ बनाउनको लागि एक सस्तो र एकदम सरल डिश।
चची र मीठा आलु स्टू
तपाइँको थर्मोमिक्सको साथ कसरी एक छोसा र मिठो आलु स्टू तयार गर्ने बारेमा पत्ता लगाउनुहोस्। Healthy० मिनेटमा एक स्वस्थ, स्वस्थ डिश तयार।
पेलेरोसिला छोला स्ट्यु कालाको साथ
काले काले र आलुको साथ प्रेड्रोसिलानो चिसोको सुपर स्वस्थ स्टू। अद्भुत पौष्टिक गुणहरूको साथ दोस्रो कोर्सको रूपमा आदर्श।
हाम्रो खानामा फलफूलहरू समावेश गर्न dis व्यंजनहरू
थर्मोमिक्सको साथ leg लेगम व्यंजनहरू सन्तुलित आहार पछ्याउनका लागि उत्तम हुन्छ
थर्मोमिक्समा साधारण र छरितो पकाइएको कसीया क्रीम तयार पारियो। एक उत्तम बनावटको साथ, हामी हाम्रो मेशिनका साथ सबै क्रिमहरू बनाउँछौं।
भेगन ट्रिप यसको शाकाहारी संस्करणमा फलफूलको संसार भित्र यस क्लासिक डिशको सबै स्वादको आनन्द लिन एक राम्रो विकल्प छ।
कुखुरा र chorizo ​​संग बीन स्ट्यू
तरकारी, कुखुरा र चोरिजोको साथ स्वादिष्ट बीन स्ट्यू। शरद welcomeतु स्वागत गर्न आदर्श।
गाजर भिनाग्रेटको साथ सेतो सेम
तातो दिनहरूमा फलफूलहरू राख्ने राम्रो तरिका: सेतो सिमी (चिसो) गाजर, प्याज र कडा उडाइएको अण्डाको भिनाग्रेटको साथ।
यो पेस्तो सलाद १० मिनेटमा तयार हुनेछ। गर्मीमा तरकारीहरू खानको मूल तरीका र घरेलु पेस्तो सॉसको सबै स्वादका साथ।
हल्दी र तरकारीको साथ दाल
दाल, हल्दी र तरकारीका सबै फाइदाहरूसहित एउटा थाल। तातो नडराउनुहोस् किनभने यसलाई तातो लिन सकिन्छ।
स्याउ करीको साथ दाल
शाकाहारी आहारको लागि आदर्श, विदेशी स्टिउड मसूर, करीको टचको साथ कारमेलिज्ड एप्पल वेजको साथ प्रयोग गरियो।
ताजा बीन र कोड सलाद
ताजा बीन र कोड सलाद गर्मी को लागी आदर्श हो। स्वस्थ, स्वस्थ, सजिलो र १० मिनेट भन्दा कममा तयार। समुद्री तटमा लिनको लागि उत्तम!
बच्चाको लागि दाल र तरकारीहरूको क्रीम +१२
१२ महिना भन्दा बढि बच्चाहरूको लागि विशेष मसूर र तरकारीको क्रीम। फलफूलको उपभोगमा सुरू गर्न एक आदर्श डिश।
द्रुत तरकारी स्टू
पारम्परिक लेगुम स्ट्यू रिच सब्जीहरू र मोटो ब्रोथको साथ, थर्मोमिक्समा बनाइन्छ। छोलाको साथ, सिमी वा दुवै फलफूलको साथ।
पनीर र टमाटर सॉसको साथ मसूरको सलाद
पौष्टिक मसूरको सलाद, एक स्वादिलो ​​चीज सॉस, प्राकृतिक टमाटर र पुदीनाको साथ। मुख्य पाठ्यक्रमको रूपमा आदर्श।
स्क्विडको साथ सेतो बीन स्टू
सिम र स्क्विडको साथ एक सरल र नम्र स्टू, तर धेरै स्वादिष्ट र पौष्टिक। इस्टरमा मुख्य कोर्सको लागि आदर्श।
स्टूको साथ Chickpea स्टू
एक हल्का र धेरै पौष्टिक चना स्टू। एक दोस्रो पाठ्यक्रम को लागि सलाद संग आदर्श।
भेगन रेड बिन स्ट्यू
मकैको साथ एक शाकाहारी र मसलादार रेड बीन स्टू। जाडो दिन को लागी आदर्श।
मशरूम र चोरिजोको साथ दाल
स्वादिलो ​​र पौष्टिक स्टीउड मसूर, मौसमी च्याउ र अस्टोनियन चोरिजोको साथ प्रस्तुत। चिसो दिन को लागी एक उत्तम पकवान।
हजुरआमा जुलियाको सेम शोरबा
चिसो र क्रीमयुक्त हरियो बीन ब्रोथ, चिसो र वर्षाको दिनहरूको लागि उत्तम। अग्रिम तयारी गर्न को लागी आदर्श
ब्रड सिमी मसलाको साथ टोस्ट
एउटा अचम्मको डिश: सिमी आगोमा भुलिन्छ र मसलाको उत्तम मिश्रणको साथ अनुभवी हुन्छ। मासु र माछा साथ वा aperitif को रूप मा आदर्श।
मसूर र टुना सलाद
टमाटर, प्याज, कालो जैतुन र जीराको एक टचको साथ दाल र टुना सलाद।
पालक र दालको साथ बनेको फलामको धनी सलाद। यो तातो र चिसो दुवै खपत गर्न सकिन्छ।
अदुवा हम्मास परम्परागत तरकारी चना पटेको एक भिन्नता हो, अरबी खानाको विशिष्ट।
दागिहरू जस्ता, परम्परागत सेतो बीन्सको स्वाद र बनावटको साथ, पसलको साथ तातो चम्चा थाल, हिउँदको लागि आदर्श, तर चाँडो र सजिलोसँग।
रातो ह्यूमसले भुनेको काली मिर्चलाई परम्परागत अरबी छोला ह्युमसमा समावेश गर्दछ।
चाना संग Zucchini क्रीम
एक स्वादिष्ट शाकाहारी क्रीम, सजिलो, सस्तो र स्वस्थ जसले हामीलाई धेरै-आवश्यक फलहरू खान मद्दत गर्दछ।
कद्दूको बत्ती र बच्चाहरूको लागि सेतो सेम
कद्दू र तरकारीहरूसहित पौष्टिक सेतो गेडाहरू, कम क्यालोरी आहार र बच्चाहरूको लागि आदर्श।
चामल र छुन सलाद
धेरै नै चामलको सलाद: टुना, छोला, किसमिस र तरकारीहरू सहित।
Thermomix संग हामी छोटो समयमा र प्रयास बिना तरकारी संग केहि स्वादिष्ट दाल, नरम र सम्पूर्ण परिवार को लागी सही हुनेछ। तपाइँ कसरी जान्न चाहानुहुन्छ? तरकारीका साथ दालको लागि यो सरल विधि पत्ता लगाउनुहोस्।
यो छोला क्रीम बच्चा र वयस्कहरूको आहारमा अपूरणीय फलहरू पेश गर्न एक उत्तम विकल्प हो। यो एक धेरै नरम क्रीम हो, जुन गर्मीमा तातो वा चिसो लिन सकिन्छ र चिसोमा चम्चाको थालको रूपमा।
मटर Würstel संग
यदि त्यहाँ कुनै साना व्यक्तिले यस फलीलाई खान मन पराउँदैन, Würstel को साथ मटर बनाउन कोसिस गर्नुहोस्। यो उनीहरूको लागि एक आकर्षक पकवान हो।
मसालेको मसूरको सलाद
स्वादिष्ट मसूरको सलाद, मसलाको इमल्सनले सजिएको। तातो गर्मी को दिन को लागी एक स्टार्टर को रूप मा आदर्श।
गाजर र मसूर क्रीम
बच्चा र वयस्कहरूको लागि द्रुत, सजिलो र कम क्यालोरी डिश: एउटै थालमा गाजर र दाल, फलफूल र तरकारीहरू।
खोर्सानी वा चिली कोन कार्ने
ताजा सागरको अर्को पट्टि अवतरण गर्दै, टेक्स-मेक्स भोजनको यो स्वादिष्ट पकवान आइपुग्छ: चिली कोन कार्ने। चामलको साथ यो एक उत्कृष्ट अनौंठो डिश हुनेछ।
चामल र बच्चाहरूको लागि एवोकैडोको साथ दाल
चामल र भोकटाडो बच्चाहरूको लागि आदर्श, भिटामिन र खनिजहरूले भरिएको मसलाको दाल प्लेट केवल डेजर्टको साथ पूर्ण गर्न।
करी सुगन्ध संग Chickpea hummus
करीको गन्धको साथ विदेशी छोसा हमस, स्टार्टर वा बेलुकाको खानाको रूपमा आदर्श। शाकाहारी र बच्चाका लागि फलफूल खानका लागि उत्तम।
केटाकेटीहरूका लागि गेडागुडी खानको निम्ति सजिलो ट्रिक: तिनीहरूलाई राम्रो क्रीममा परिणत गर्नुहोस् जुन वयस्कहरूलाई पनि मनपर्दछ
फोइ ग्रास र रोटीको टुक्राको साथ मसूरको क्रीम
फोइ घाँस र रोटीको टुक्राको साथ मसूरको क्रीम एक उत्तम पहिलो पाठ्यक्रम वा एक उत्तम भूख हो यदि तपाईं सानो कन्टेनरमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भने।
हरियो सासमा क्लैमको साथ क्रिसमस सिमीहरू
समुद्री खाना क्लामको साथ क्रिसमसका लागि स्वादिष्ट विशेष सिमीहरू। मुख्य पाठ्यक्रमको रूपमा आदर्श।
खुर्सानी र खसी पनीरको साथ
छानाको एक स्वादिष्ट र मौलिक संयोजन मिर्चको ओछ्यानमा saut .ed र बाख्रा पनीरको क्रीमले ढाकिएको। कसले भने फलहरू बोरिंग थिए?
मटरको साथ प्लेटमा अण्डाहरू
प्लेटमा यी अण्डाहरू बेबी मटर र एक स्वादिष्ट घरेलू टमाटर सॉसको साथ पूर्ण रूपमा जान्छन्। सासमा आफ्नो व्यक्तिगत स्पर्श थप्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्।
बेकन संग मटर
बेकन संग, सेरानो ह्यामको साथ र पकाएको ह्यामको साथ पनि, यी मटरहरू एक उत्तम डिनर हुन् जुन तपाईं सँगै गर्न सक्नुहुनेछ थर्मोमिक्समा बनेको मसलाएको आलुको साथ।
थर्मोमिक्समा पकाएको गेडाहरू
के तपाईं Thermomix को साथ घर बनाएको पकाउने बनाउन चाहनुहुन्छ? यो विधि पत्ता लगाउनुहोस् जुन तपाईंलाई यस प्रकारको बीनको मजा लिन दिनेछ जुन अमेरिकामा लोकप्रिय छ।
क्लैम्पको साथ छोला सूप
सीपीको साथ चना क्रीम कसरी तयार गर्ने सिक्नुहोस्। Thermomix को साथ गर्न को लागी धेरै सजिलो र गुणहरूले भरिएको। प्रयास गर्नुहोस्, तपाईंलाई यो मनपर्नेछ
चिक्का र चार्ट स्ट्यु
कसरी Thermomix, एक सामान्य पकवान संग पूर्णिमा यी दुई अवयवहरू संयोजनको साथ एक छोसा र चार्ट स्ट्यु कसरी बनाउने सिक्नुहोस्। तपाईंले अहिलेसम्म गर्नुभएन?
हल्दी र नरिवलको साथ भारतीय मसूर
नरिवलको साथ भारतीय दाल, एक शाकाहारी, मसलादार र स्पष्ट हिन्दु-प्रेरित नुस्खा जुन तपाईं थर्मोमिक्ससँग सजिलैसँग तयार गर्न सक्नुहुन्छ
कुखुराको साथ दाल
थर्मोमिक्समा कुखुराको साथ क्लासिक मसूर कसरी तयार गर्ने सिक्नुहोस्, पहिलो पाठ्यक्रमको लागि उत्तम घरेलु नुस्खा। ती स्वादिष्ट छन्।
शाकाहारी मसूर दाल बनाउन को लागी Thermomix, पूर्ण शाकाहारी, कम क्यालोरी तर धेरै प्रोटीन, भिटामिन र खनिजहरूको साथ।
कालो सिमी प्यूरी
पिन्टो बीन प्यूरीको लागि नुस्खा Thermomix, शाकाहारीहरू र सबै दर्शकहरूको लागि एक डिश जुन तपाईं मात्र 30० मिनेटमा तयार गर्न सक्नुहुन्छ।
मसलादार भारतीय मसूर क्रीम
Thermomix को लागि मसलादार भारतीय मसूर क्रीम, एक विदेशी स्वाद, मसलादार र मसलादार, शाकाहारी र शाकाहारी र एक अनिवार्य स्वादको साथ शाकाहारी।
Genoese Pesto को साथ समर Minestrone
गर्मी को लागी स्वादिष्ट minestrone। एक गर्मी स्टार्टर को रूप मा आदर्श। छोला, टमाटर, पास्ता र पेस्टोको साथ जुन हाम्रो माइनस्ट्रोनलाई, विशेष इटालियन पकवानलाई विशेष स्पर्श दिन्छ।
निम्बूको ड्रेसिंगको साथ छोलाको सलाद
ताजा चना सलाद जुन हामीलाई तातो मौसममा फलहरू लिन मद्दत गर्दछ जब हामी स्ट्युहरू जस्तो महसुस गर्दैनौं
बीन स्ट्यू एउटा भाँडा हो जुन मलाई मेरो बाल्यकालको सम्झना गराउँछ। यो नुस्खा चम्चा व्यंजनहरु को मूल संग्रह को हिस्सा हो।
हल्का चुना स्टू
केही साधारण छोलाको साथ तपाईं चाँडो र सस्तोमा चिसो दिनको लागि स्टू बनाउन सक्नुहुन्छ। ढुवानी गर्न सजिलो र फ्रिज पनि गर्न सकिन्छ।
यो छुन ह्युमस रेसिपी क्लासिक हो। अरबी खानाको स्वाद लिने मेनूमा वा कुनै खाजामा आवश्यक छ।
स्प्रिंग चिसो एक नुस्खा हो कि फल बनाउन को लागी छिटो र सजिलो सास संग मिसिन्छ। समय घटाउन पहिल्यै पकाएको चिसो प्रयोग गर्नुहोस्।
मटाचाना रगत सॉसेजको साथ दाल
के तपाईलाई मटाचाना रगत सॉसेज दिइएको छ र तपाईंलाई यो कसरी प्रयोग गर्ने थाहा छैन? यस विधिलाई हेर्नुहोस् र चम्चाको भाँडाको आनन्द लिनुहोस्।
केही पफ पेस्ट्री प्यारीहरू थप्नुहोस् र तपाईं सामान्य मटर क्रीमलाई भ्यालेन्टाइन डे मनाउन उत्तम विधिमा बदल्नुहुनेछ।
हल्का मसूर स्टू
दालको लागि यो नुस्खाको साथ तपाईंसँग क्लासिक जाडोको थाल हुनेछ तर तिनीहरूलाई हल्का र स्वस्थ बनाउनको लागि डिजाइन गरिएको हो।
हेम र टमाटरको साथ मटर
हेम र टमाटरको साथ मटर गेरागुडी सहित एक नुस्खा हो। जाडो दिनहरूको लागि आदर्श र तपाईं सजिलै अफिसमा लिन सक्नुहुनेछ।
छोला संग पालक एक पारंपरिक नुस्खा हो प्राकृतिक स्वाद का सबै स्वाद संग।
के तपाइँ एक खास इस्टर रेसिपी चाहनुहुन्छ कि तयार गर्न सजिलो छ? हामी कसरी छँटा, पालक र कोड को साथ एक उठ्ने सूप बनाउन को लागी हामी तपाइँलाई देखाउन।